Honda Fit 2012 အား ကမာရွတ် တွင်​ ipivi.com မှတဆင့်​ ဝယ်​ယူပါ။
Price	-	198 သိန်း
GE6-1705272 , 2012Model, 1300CC,
White Color , 26000Km , Grade 4BB/G
Car No.	-	Sati/…. (MDY)
"ဂျပန်ကားလေးတွေကို အမှတ်တရ၀ယ်ယူသိမ်းထားဖို့အတွက် အသစ်နီးပါးလောက်ကောင်းတဲ့
Honda Fit (ကီလို 26000)ဘဲရှိတဲ့ ကားလေးကတော့ 198 သိန်းပါ ….."
G Grade , Original TV& Back Camera , Airbag , Aircon
"* မန္တလေးလူနံမည် အမည်ပေါက် Grade မြင့်မြင့်၊ Model မြင့်မြင့်၊ ကီလိုနဲနဲ 26000KM (လုံးဝအမှန်)
အိမ်စီးကားသန့်သန့်ကောင်းကောင်းလေး အတိုက်အခိုက်လုံးဝမရှိ *"
မူဝါဒအသစ်အရ ယခုနှစ် 2018 ခုနှစ်မှစ၍ (2016Model မှ 2018Model)ထိ ဘယ်မောင်းကားများသာ တင်သွင်းခွင့်ရှိပါသည်။ Japan ညာမောင်းကားများ ထပ်၍ တင်သွင်းလို့မရတော့ပါ။ မော်ဒယ်မြင့်သာ တင်သွင်းခွင့်ရသောကြောင့် ကားတန်ဖိုးမှာလည်း ယခုကားဈေးနှုန်းနှင့် အရမ်းကွာသွားပါလိမ့်မည်။ ဒါပြင် ဘယ်မောင်းကားဘဲရမှာပါ။ ဒါကြောင့် ဈေးနှုန်းသင့်တင့်သော Japan ညာမောင်းကားများကို ၀ယ်ယူဖို့ လူကြီးမင်းတို့အား တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။